Kunamata Points Kuti Tize Musungo Womuvengi | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Kuti Tize Musungo Womuvengi
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato mapoinzi kuti titize musungo wemuvengi. Dhiabhori haana mumwe bhizimisi pane kuparadza magumo evanomira naMwari. Hazvishamise kuti rugwaro runoti mubhuku ra 1 Petro 5: 8 Svinurai, murinde; nekuti muvengi wako dhiabhori anofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka waingaparadza. Kazhinji pane zvisiri izvo, muvengi anoshandisa vanhu kurwisa vatendi. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Mambo David vachirwisa Mambo Sauro.
Bhaibheri rakanyora kuti Sauro akaita godo uye aida kuti Dhavhidhi afe nenzira dzese. Panguva dzinoverengeka sezvakanyorwa nerugwaro mambo Sauro achaedza hupenyu hwaDavidi. Zvisinei, Mwari anogara akatendeka kununura vanhu avo vanodanwa nezita rake. Rugwaro runoti mubhuku ra Mapisarema 34:19 matambudziko aakarurama mazhinji, asi Jehovha anomurwira abude paari ose. Mwari vakatendeka zvakakwana kutinunura kana isu chete tichivimba nekumuteerera nguva dzose.
Tichave tichinamata kuna Mwari nhasi kuti atinunure kubva mumusungo wedu Muvengi. Muvengi anoshandisa zvinhu zvakasiyana siyana kukanganisa rwendo rwevana vaMwari. Nepo muvengi akashandisa Sauro kurwisa David, nyaya yaJoseph yaive yakasiyana. Muvengi akashandisa mukadzi waboss waJoseph, mukadzi waPortiphar kumurwisa. Dai chete Joseph akawira mumusungo iwoyo, angadai asina kukwanisa kuzadzisa chinangwa chaMwari chehupenyu hwake. Ndinoraira nesimba rematenga, zvese zviteyeso zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwako zvinoparadzwa nemoto weMweya Mutsvene.
Pane zviitiko apo dhiabhorosi anoshandisa akasiyana muyedzo kurwisa mutendi. Jobho aive muenzaniso unoshanda weizvi. Akarwadziswa zvakanyanya nemuvengi. Chinangwa chekushungurudzwa kwake kwaive kumuita kuti asiye Mwari, asi Jobho akabatirira pakutenda kwake. Redu rinogona kunge rakasiyana neraJakobho, muvengi anogona kushandisa mumwe musungo kwatiri. Chingave chirwere, chingave chirwere, chingave chero chinhu. Zvisinei nezvo izvo dhiabhori angangoda kushandisa kutirwisa, ichi chivimbiso chekuti tinacho munaIshe sezvakataurwa mubhuku ra Mapisarema 124: 6-8 Ishe ngaarumbidzwe, Iye asina kutipa isu kuti vatapwe nemeno avo. Mweya wedu wapukunyuka seshiri parugombe rwomuteyi weshiri; rugombe rwadambuka, isu tapukunyuka. Rubatsiro rwedu rwuri muzita raIshe, akaita denga nenyika ”.
Tinoziva kuti Mwari wedu anokwanisa kutidzivirira kubva kune vese. Ini ndinoshambadza nemasimba edenga, hurongwa hwese hwemuvengi hwekugadzira iwe kuti uparadzwe nemoto weMweya Mutsvene. Ndinoraira nesimba rematenga, hurongwa nehurongwa hwemhandu pamusoro pehupenyu hwako hazvizoitwe zvakavanzika muzita raJesu. Mwari vacharamba vachifumura hurongwa hwemhandu kwauri muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokukudzai nekuda kwenyasha dzenyu nedziviriro pamusoro pehupenyu hwangu. Tsitsi dzenyu ndidzo dzakandichengeta kusvika pano, ndidzo tsitsi dzenyu dzandisingapedze kana kukurirwa nemuvengi. Ndinokudzai imi Ishe Jesu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe, ndimire pachivimbiso cheshoko renyu mubhuku raIsaya 49:25 Asi zvanzi naJehovha: Kunyange vatapwa vevane simba vachatorwa, uye zvakapambwa zvevanotyisa vachadzikunurwa. Nekuti ndicharwa neanorwa newe, Uye ndichaponesa vana vako. Ndinoraira kuti hondo yekudenga irwisane neavo vanokwikwidza neni muzita raJesu.
Ishe Jesu, imi muri nhovo yangu nenhovo yangu rubatsiro rwezvino panguva yekushayiwa. Ndinokumbira kuti nenyasha dzenyu mununure kubva pamusungo wevavengi vangu. Ndinokumbira kuti nesimba rako iwe uparadze marongero emuvengi pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe, nekuti zvakanyorwa kuti musabata vasina kuzodzwa vangu uye musaite Muporofita wangu hapana chakaipa, ndinoti hapana chakaipa chichauya pedyo neni muzita raJesu. Hapana chakaipa chinosvika padhuze nepandinogara muzita raJesu.
Tenzi, murume wese kana mukadzi akapihwa nemuvengi kuongorora hupenyu hwangu, ndinosheedzera kufa kwako nhasi muzita raJesu. Murume nemukadzi wese ane bhizinesi rake rekuda kundikuvadza, ndinoraira nesimba redenga, rasa simba rako nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinotsiura muvengi pamusoro pehupenyu hwangu. Agenda yavo ngaiparadzwe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Izwi rako rakati iwe uchandichengetedza kubva kumusungo weFowler, iwe uchadambura musungo weFowler uye uone kuti rusununguko rwangu rwakavimbiswa, ndinotaura chivimbiso ichi muchokwadi muzita raJesu.
Ishe sebhuku raPisarema 141: 9 yataura kuti Ndichengetedze kubva pamushaya weteyo yavakanditeyera,
Uye pamisungo yevaiti vezvakaipa. Ndinonamata kuti maoko ako edziviriro ave pamusoro pangu pese pandinoenda muzita raJesu.
Ishe Mwari, izwi renyu rakataura kuti Muchandiburitsa mumambure avakandiviga pakavanda, Nekuti ndimi simba rangu. Ishe, ndinomira pamusoro pevimbiso yemazwi aya muzita raJesu. Ndinoraira kuchengetedzeka kwangu kuve kwechokwadi muzita raJesu.
Ishe, ndinoraira kuti simba raMwari Wemasimbaose riparadze zvese zviteyeso zvandakateyerwa nemuvengi. Sekubatsira kwawakaita David kunzvenga misungo yese yaaipomerwa naSauro, ndinoraira kuti rubatsiro rwako ruuye kwandiri muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa, hapana chombo chakagadzirirwa kundirwisa chinobudirira. Chero nzira iyo muvengi ari kuronga kundirwisa, ndinoparadza zvirongwa zvavo nemoto muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Poindi Kupokana Nekuzviuraya Kuedza
inotevera10 Rugwaro Kutanga Zuva Rako
Joyce Burnett Chikumi 17, 2021 Panguva ya1: 51 pm
Ndokumbira mundinamatirewo kuti ndinunurwe kubva mumweya werufu nevavengi vangu
admin vashandi June 21, 2021 Pa 5: 18 am
Ndinoraira muzita raJESU Kristu, iwe unonunurwa. Ndinotsiura ropa ripi rinosveta ropa pamusoro pehupenyu hwako, ndinovaendesa pamuchinjikwa weKarivhari pane kuwanda kweropa muzita raJesu. Ndazivisa sununguko yako nhasi muzita raJesu.
Joyce Burnett Chikumi 17, 2021 Panguva ya1: 52 pm
Kuti ndinunurwe mumweya werufu nevavengi vangu
Godfrey June 19, 2021 Pa 10: 27 am
Mhinduro: mamwe mafuta matsva pauri
Godfrey June 19, 2021 Pa 10: 30 am
namatira ini, basa rakanaka nditsvagire, uye chigunwe chaMWARI chishandise zvivimbiso zvake muhupenyu hwangu, nekuti anoti achanyora mitemo yake mumoyo yedu
admin vashandi June 23, 2021 Pa 6: 43 am
Ndinonamatira kuzadzikiswa kweyakareba vimbiso dzaMwari pamusoro pehupenyu hwako. Kumirira kwako kwapera, dai maoko aMwari Samasimba azadzikisa zvese zvivimbiso zvaishe pamusoro pehupenyu hwako muzita raJesu.
admin vashandi June 27, 2021 Pa 7: 46 am
Ndinonamata nemasimba edenga, iro basa reroto rikuwanire nhasi muzita raJesu. Ndinoraira nesimba redenga, iro basa rinozopedza dambudziko remari muhupenyu hwako, ndinonamata kuti basa riwane iwe nhasi muzita raJesu.
Ottila Chikumi 23, 2021 Panguva ya1: 28 pm
Ndinonamatira kununurwa kubva pakurwiswa nemweya wakaipa kuburikidza nehope uye chero musungo wandakagadzirirwa ini nevavengi vangu Ndinonamata kuti ndinunurwe kubva kumweya wekumira mumativi ese ehupenyu hwangu. Ini ndinomira pakutenda kwezvivimbiso zvaIshe wedu uye muponesi Jesu, mupedzisi wekutenda kwedu, hakuna chinhu chakaomera Ishe, vaIjipita vamuri kuona iye zvino hamuzovaona zvakare. Ameni
Dickson Rubanzibwa June 24, 2021 Pa 8: 12 am
Niombee Mtumishi wa Bwana, Nafatiliwa uye mizimun ya ukoo
Wemunamato wega Wenyasha Mune Imba yakaoma Yeroora
Mavhesi eBhaibheri Nezve Kutsamwa